Thandani Izimvo zeQakamba kwilizwe leqakamba
0 Ukuze boo okanye hayi boo ...
ipapashwe 10th EyeKhala 2019 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Ostreliya.
Ngexesha indebe yehlabathi ODI kubekho ingxoxo eqhubekayo phakathi abahlalutyi malunga abasabela ngayo izihlwele ukuya 2 cheats Australian. Eoin Morgan akazange athabathe indawo wathi wabona nga phezulu kuye ukuba axelele abalandeli ukuba mawuthini okanye ucinge. Virat Kohli wacela nabaxhasi ukuba Boo kwisibini ngendlela ebonisa kakuhle ukuba mhlawumbi musa bafanelwe. abadlali England Owayesakuba kuquka Graeme Swann baye embi kakhulu malunga booing, njengokuba babe baninzi Australian ex-kwizazi. Ngoko ke yintoni na uluntu ukubukela ukwenza?
... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: david Warner, lokukhuhla, Steve Smith
0 2019 uthuthu
ipapashwe 10th EyeKhala 2019 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi uthuthu.
Ngoko ke, kunye cricket indebe yehlabathi iseyisangene, lixesha lokuba uqalise ukucinga malunga isiganeko engundoqo kwehlobo leqakamba: i uthuthu! Kule kwemali yokugcina neNgilani kwakhona yoyi wayicola phantsi, kodwa baye balahlekelwa ekhaya iminyaka 18. Ephepheni omabini abanye abadlali top, ngoko kukhangeleka ngathi ingaba la manqaku basondeleyo ukususela 2005 Ukuqinisekisa ukuba baphume phezu eNgilani kuya kufuneka ukuba ukulungisa eminye imiba ezinkulu ngaphezulu kwe odolo zazo.
tags: Ostreliya, eNgilani, uthuthu
0 Kwenzeka ntoni ngo-2018
ipapashwe 10th EyeKhala 2019 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Uncategorised.
Kuye ixesha elide ekubeni sabelana iingcinga zethu ihlabathi weqakamba. A lot kuye kwenzeka ngelo xesha. Ndikunye England ne Australia ucwangciselwe ukulwa kwakhona, kuzo zombini ODI ne Uvavanyo cricket kuba akukho ngaphantsi amadoda kunye nabasetyhini, kukho ixesha ophezulu sigubungele ezinye wokugqibela 18 kwiinyanga.
tags: umpheki, eNgilani, ODI, lokukhuhla, Steve Smith, warner, ikomityi yelizwe
0 Omnye-nil ukuya Aussies - umdlalo on
ipapashwe 28th EyeNkanga 2017 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Ostreliya, eNgilani, uthuthu.
Ngoko ke uvavanyo lokuqala phezu, kunye Australia yawugcina umlando wawo elide yempumelelo kwezo Gabba ukuya akumangalisi enkulu apha. Ngoko ke, yintoni positives siya kuyo?
tags: 1st test, uthuthu, Ostreliya, Bairstow, umpheki, eNgilani, Moeen Ali, ingcambu, Smith
0 eNgilani: Ixesha i "Sir Alex" Umphathi isimbo?
ipapashwe 15th EyeNkanga 2017 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi eNgilani.
Uxanduva ngumceli-mngeni sonke ngaxa lithile ebomini bethu. Abanye bethu nayo entsha, abanye Zange kakhulu ukuqonda ukuba ngalo lonke. iimeko Ubomi kunokusinceda okanye wasibambezela, kanjalo luck ecaleni indlela. Abantu abadumileyo kunye namanani oluntu ajongene nemingeni efanayo sonke ubuso, kodwa ukwenze oko emehlweni uluntu apho wonke (kwaye wenza) bahlulelwe. Phosa negama kunye nemali kunye mngeni ufumana zonke elikhulu. Kunokuba balinde iimpazamo ukuba kwenzeke uze lambaste yimizekelo yethu indima entsha, ngaba ikho into enokwenziwa ukuze kuncedwe ukuzilungiselela?
tags: uCaptain Cook, P., Manager, pedalo-esangweni, uxanduva, Sir Alex Ferguson
0 Umdlalo we-luvo?
ipapashwe 14th EyeNkanga 2017 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Uncategorised.
Yilaa xesha kwakhona - ubusuku obude, umoya obandayo, kodwa kungekudala unomathotholo uya umlilo ebomini baze bazise izandi zasehlotyeni Australian ezindlebeni zethu. England uza kubuya evela oluhlephukayo edlulileyo neqela win (njengokuba benzayo 2010-11, okanye kugqiba Australia 3rd uwaqabe ku 4 uthotho. Ngokuba mnye am ukubheja akuyi kuba draw!
tags: uthuthu, Ostreliya, eNgilani, Graeme Swann, Jonathan Trott, kevin Pietersen, ulawulo
0 500 kunye? Mhlawumbi Lo woNyaka
ipapashwe 28th EyoMdumba 2017 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Enye Internationals Day. uvuselelwe 14th EyeNkanga 2017 .
umfundi Okokuqala othandekayo uxolo ngenxa yokuswela zethu zonxibelelwano lwakutshanje - sobabini siyaqonda ukuba abantu kuthatha ixesha kuthungwa ngayo nangona zethu kwaye siyathemba ukuba kuqhubeka ukwenza njalo.
Ngoku phantsi ishishini.
Buyela ku Agasti kunyaka ophelileyo eNgilani wenza lo lee, waziqhekeza irekhodi awona manqaku aphezulu ngamazwe ngonaphakade ngenye imini, ukuthumela i-444-3-ibaleke ngaphezulu kunetotali yangaphambili eyayimi kancinci ngaphezulu kweshumi leminyaka.
Yaba wamelwa score - owawuza baye babonwa nje kwathiwa kwiminyaka engaphambili. Kodwa umdlalo, ezifana ukuze bekwenza eNgilani, aye kufika e iifotsholo kutshanje kunye T20 cricket ngokubekwa kakhulu isiseko uhlobo olutsha umdlalo. ... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: alex Hales, Joe Root, ukuba Buttler
0 Ngenkohlakalo India Brighton Iindwendwe
ipapashwe 12th EtiMnga 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 14th EyeNkanga 2017 .
Kwakukho inqaku kuvavanyo lwesine phakathi kweIndiya neNgilane xa imikhosi ibiyi-30-odd ibaleka emva kwabachasi bayo kushiyeke iiwikethi ezintathu.
Yaba isifingo esingeyonyani nangona kwaye yobuciko Kohli magnificent Jayant yadav (Kuvavanyo lwakhe lwesithathu kuphela) zidityanisiwe ukuthatha umdlalo kunye nawo onke amathemba kuthotho lokuzoba ngaphaya kokuqonda kweendwendwe.
Wawusebenza ukuba ukrwele umsantsa kumava kwemeko sub-ilizwekazi. India ingene ekhaya ulwazi lwabo mkhulu kunye nokuqonda nendlela adlale kumabala emiboniso enjalo. Ngokusebenzisa inkoliso yale ngcelele baye ngcono emacala kude kunye win okukhulu kanye abakhokela 200 iye yanikezela. ... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: adil Rashid, Alastair Cook, Ben Stokes, Chris Woakes, Gareth batty, Haseeb yerada, Jayant Yadav, Joe Root, Keaton Jennings, Moeen Ali, Virat Kohli, Zafar Ansari
0 EAustralia Golden Era iyamxhela Cricketers Current
ipapashwe 16th EyeNkanga 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Ostreliya, Test Cricket. uvuselelwe 14th EyeNkanga 2017 .
Australia - Yingxaki enjali le! Ndiye ukuba ulahlekelwe thotho nxamnye eMzantsi Afrika emva ezithile elwela siyabutyaka ifanelwe of England hle kakhulu (okanye imbi!)
It Kuyamangalisa ukubona kwenzeke ntoni na icala xa zithelekiswa iqela kutsha nje kwixa elidlulileyo. Kukho ngaba isipha enkulu inkunkuma umgca up - Andikwazi ukucinga nabani na wenze icala waseNgilani owayedlala kovavanyo lokugqibela nxamnye South Africa. Kulungile ukuba babe ukulimala ezimbalwa, ingakumbi isebe yokubhowula, kodwa izinto kuya kufuneka batshintshe. ... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Adam Gilchrist, darren Lehmann, Justin Langer, Mateyu Hayden, Shane Warne
0 Amaqhinga Political Qala Series Ngenhliziyo Bang
ipapashwe 13th EyeNkanga 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Ostreliya, eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 28th EyeNkanga 2017 .
Ebudeni ngeveki apho ihlabathi wabona uMongameli omtsha onyulwe Commander-in-Chief eMelika British Prime Minster Theresa May watyelela India, Kusenokwenzeka ukuba uvavanyo lokuqala luthelekiswa nobuqhetseba bezopolitiko behlabathi.
Isisho ukuba veki lixesha elide kwezopolitiko - yaye ilizwi kuya kuvela kangakanani lesizwe kakhulu.
namarhe kodwa kwiintsuku ezimbalwa nje edlulileyo ezininzi (ngokwam ziquka) babesoyika onke akwazi ukohlwaya i ngekalika series kwi iindwendwe - ingakumbi xa umyalelo phezulu ngakumbi isicelo ngokwabo ngcono .... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: adil Rashid, Alastair Cook, Haseeb yerada, Theresa May